Abantu abaninzi bayazi ukuba ipolisi yinto yokuveliswa kwezinyosi kwaye iququzelelwe ngumxube wamafutha abalulekileyo kunye nama-resins. Izinyosi zivalela iipolisi kunye nemihlathi yazo, zomeleze i-honeycombs, kwaye, ngoko zikhubaza iindawo zokuhlala, zikhusele kwiintsholongwane kunye neebhaktheriya. Ipropolis isusa i-toxins, inezixhobo ezichasayo, izivimbela ukukhula kweeseli zomhlaza. Wonke umntu uyazi malunga neempawu zokuphilisa ipropolis, kodwa akukho mntu uyazi ukuba ungasetyenziswa njani kunyango.
Ipropolis ibaluleke gqitha xa ikhutshwa, ithatha isipuni sepropolis, enye i-spoonful ye-bex, ifake indebe uze utyutywe kwindawo yokuhlamba amanzi. Ngaba uphuphule izifo ezifana ne-bronchitis kunye ne-tracheitis.
Siza kushushumbisa i-propolis, yenze ikheke elincinci kwaye uyisebenzise kwindawo enzima. Phinda ulandelelanise de kube i-corns iphela. Xa unyango lwezifo zomlomo kunye ne-caries siza kuthenga i-propolis kwi-pharmacy, sinciphise amancinci amaninzi e-propolis ngamanzi abilisiwe kwaye uwahlanza ngomlomo.
Ipropolis, eyaziwayo kuthi, njenge-bee putty, i-bee glue, ine-antibacterial strength. Iqulethe izinto ezininzi, kunye ne-glycosides, iivithamini zenza icandelo eluncedo kumzimba.
Kwamava abo, oogqirha babekholelwa ukuba i-propolis inceda nge-eczema, i-abscesses, i-bedsores, ukutshatyalaliswa okwehlukeneyo, ukuphucula isimo somzimba kunye nememori, ivakalelwa kakuhle, ilawula inkqubo ye-nervous, iyakhathaza ukuvuvukala kwi-esisopha kunye namathumbu, kwaye iphucula umbono. IPolisi iphilisa izixhobo.
Isisombululo sePolisi ebisi
Isetyenziselwa kunyango lwexinzelelo, i-bronchitis, isifo se-asthma.
Thatha ilitha yobisi olubisiweyo, yongeza 50 g yepropolis yomhlaba. Udibanise kunye ne-spoon yeplanga malunga nemizuzu engama-10, ngoko uhamba ngeendlela ezintathu ze-gauze kunye netyuwa kwijeli yeglasi. Xa isisombululo sele sehlile, uluhlu oluncinci lwe-wax lubekwe phezu komhlaba, luya kususwa. Isisombululo esiphumela sikulungele. Sigcina kwifriji, kwaye siyisebenzise iyure ngaphambi kokutya kwi-tablespoon 2 ngamaxesha.
Ipropolis ngotywala iyasetyenziswa kumayeza xa kuyimfuneko yokulungiselela amayeza. Ukunyuswa kwamanxilongo kunconywa kubanda, ukuvutha kweendlebe kunye nomqala, izilonda zonyxinzelelo, amanxeba ahlambulukileyo, amanxeba. Ukwenza i-20% yotywala obunxilisayo - thabatha i-½ l i-95% yotywala yongeza i-100 g yomhlaba we-propolis, ityuwa kwibhotile ebomvu kwaye uvale ikhonkco. Siyakubeka kwindawo emnyama iiveki ezimbini. Sigubha eziliqela ngamaxesha. Izaziso ziya kuhlala phantsi, umgangatho uya kuhlala ubala, ukunyuka kwamanzi kunomfutho we-resin kunye nombala obomvu wegolide. Emva kweveki ezimbini, isisombululo sihlungiwe kwaye sidutywe kwibhotile yeglasi emnyama, ngaphandle kokucoca.
Nge-angina, sidla i-drops 30 emva kokutya, kwaye sidla kathathu ngosuku. Ngaphambi kwalo mqaleni uhlanza umhluzi wempuphu. Amadonti axutywe kunye nomthi kwaye agxininise, ke ungaphuzi uze ungadli iiyure ezimbini.
Ipropolis amanzi-alcohol emulsion
Iyakhathaza izibilini zeembrane, iilululent, amanqabunga, ukugqithisa kwesikhumba, le mulsion isetyenziselwa ukunyanzelisa.
Lungisa i-0.2%, ngenxa yoko sixuba 60 ml yamanzi abilayo abilisiwe kunye ne-10 ml yepropolis ngotywala. Isisombululo esisiphumo siya kuba ngumbala we-milky-cream.
Ngokuvuvukala kweembrane ezinamaqabunga, ngokubanda, sibamba empumlo 3 sihlahlela amaxesha ambalwa ngosuku, evuyisa kakhulu.
It isetyenziselwa iigunyule ze-venous, i-bedsores, i-hemorrhoids, i-abscesses, amanxeba, i-frostbite, ukutshisa.
Ukulungiselela u-10% wamafutha, sithatha i-70 g yeVaseline, i-20 g ye-lanolin siyashushumbisa kwi-eamel ware, engeza i-10 grams yepropolis, efakwe kwisitya kunye namanzi ashushu. Gcoba ngeglasi okanye i-spoon ngomzuzu we-10. Siya kwii-glassware nge-double gauze. Xa ioli ityhola, iya kuba ilungele ukusetshenziswa. Faka isicelo kwiindawo ezincinci zincinci elincinci kabini ngosuku kwaye uqweqwe nge-bandage okanye i-gauze kwiziqendu ezine.
Ipropolis isombulula ingxaki yokulwa nokulala.
Ipropolis unyango lwe-cartilage kunye namathambo esithambo
Ipropolis ikhubaza, ibuyisela kwakhona, igcwalisa amathambo amathambo. Emva koko, ithambo ligcwele izaliti ze-phosphorus kunye ne-calcium, kwaye i-ossification ihamba kakuhle. Akukho ziphumo zecala zigcinwa. Ngokusekelwe kwimiba evela kwimithombo eyahlukeneyo kunye namava abo, iipolisi ziphatha izifo ezahlukileyo ezingaziboleki kwezinye iindlela zokonyango.
Zonke ezi nkqubo zonyango zilawulwa ngamagqirha.
Izilonda ezindala ze-duodenum kunye nezilonda zesisu - iipolisi zamanzi ziye zafakwa kwii-fox seed broths. Emva kokusetyenziswa kweentlungu zepolisi. Ukubuyiselwa kwavela emva kweeklasi eziyi-3. Kwiinyanga eziliqela kwakungekho ukuphindaphinda kwesi sifo.
Iigundumanzi ezinomdla kwi-anus ngokuphuma kwamanzi - ngenxa yeetyilesi ezisetyenziselwa i-cocoa bhotela, i-propolis-ointment. Emva kokusetyenziswa kweziyobisi, inkululeko yafika, ukuphilisa kwavela kwiiveki ezintathu.
Ukuvuvukala kweetoni kunye ne-pus kwakucwecwe ngeenkqubo ezahlukeneyo zokulungiselela. Emva kweentsuku ezintathu zonyango, kuphuculwa ukuphuculwa.
Ukulala kakhulu kwiigulane eziphathwe ngamafutha, ukugxininiswa, isisombululo sotywala. Kwaye kwaba nempembelelo ngokukhawuleza yokuqinisa nokucoca amanxeba. Ngokuxhomekeka kokusasazeka kwezilonda zengcinezelo, ubunzulu babo, kwiimeko eziqhelekileyo zezigulane, unyango olupheleleyo luya kuba kwiiveki ezingama-6.
Apho i-antibiotics idlalwa rhoqo, i-propolis yokunyanga kwezifo ezinzulu yenza iziphumo ezintle. Iziphumo zifunyenwe kunyango lwabantu abadala. Ukukwazi ukukhumbula ulwazi kwizigulane ezingama-80 ubudala zikhuphuka xa ziqhuba ikhosi yeenyanga enye zonyango kunye nepropolis.
Kuyaziwa ukuba ipropolis inezixhobo zonyango, kwaye nangona kunemida ethile yesicelo, ipolisi ayilona i-panacea yezifo zonke, kodwa kwiimeko ezininzi kunokwenzeka ukuzama. Nangona kukho phantse akukho nxamnye nokusetyenziswa kwepropolis yamayeza.
Indlela yokukhetha i-aquarium ngeFeng Shui
Indlela yokusebenzisa i-grated horseradish
Ukuhlwa kwexesha kunye nendlela yokwenza ngayo
Iipropati kunye nokusetyenziswa kweoli yepereji
Ngubani okhanya iinkwenkwezi: abadumileyo kunye nabathathi babo
Abazalwana bakaMaladze bathetha ngokucacileyo malunga namava abo abathandekayo
Ukutolika kwamaphupha: Yintoni iphupha lezambatho?
I-Cheesecake "eNew York"
Ungayikhupha njani i-pigmentation yesikhumba?
Crostini kunye neetamatato